November 6, 2020 - Babal Khabar
Nov62020 by बबाल खबरNo Comments
एक जोडि जंगलमै एस्तो अवस्थामा रङेहात पक्राउ, भिडियो बन्यो सर्वत्र भाईरल !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
एक जोडि जंगलमा एस्तो कार्य गर्दा गर्दै पक्राउ ! भिडियो भयो भाईरल,,, (भिडियो सहित) भिडियो अन्तिममा छ नछुटाइ हेर्नुहोला !! तपाई हामीले देखेको तथा भोगेको कुरा हो विवाहपछि महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछ । पारिवारिक व्यवस्तताका कारण उनीहरुलाई आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिन सक्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको शरीरमा परिवर्तन आउँछन् । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । उनीहरुको शरीर एकदमै मोटाउने तथा हिप एकदमै बढ्छ । आखिर बिहेपछि किन उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? एक सर्वेले के कुराले महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ ? यसको खोजी गरेको छ । युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार महिलाको हिपमा आउने परिवर्तनको कारण खोजिएको छ । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्द
सावधान: हाे’टलका साउजीले नै कुखुराकाे खाेरमा लागेर एस्तो गरे, मिडियाको अगाडि दुवैजनाले खोले सबै रहश्य !! [ पुरा भिडियोसहित ]
सल्यानमा एक जना १४ वर्षकी बालिकालाई गरिबिको फाइदा उठाउँदै होटल संचालकले काम लगाइदिने बहानामा करणी गरेका छन् । साँझको समयमा घरवाटै लिएर गएका होटल संचालकले घरमा नपुग्दै बाटोमै करणी गरेको बालकाले बताएकी छन् । म जान्न भन्दा भन्दै केही हुँदैन होटलमा काम गर्ने हो भन्दै मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए । तर बिच वाटोमै पुगेपछि उनले होटलमा होइन कुखुरा फाराममा काम गर्ने हो भन्दै जंगल तर्फ लिएर गएको बालिकाले बताएकी छन् । सल्यान श्रीनगर स्थित रोयल गेस्ट हाउसका संचालक हिमराज बुढाथोकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अहिले गाउँ भरीका सबै लागेर उनीहरुलाई पैसा लिएर मिल्न दवाव दिइरहेको बालिकाले बताएका छन् । आफ्नै परिवारका सदस्य पनि पैसा लिएर मिल्नुपर्छ भन्दै आएको उनीहरुको भनाई छ । एक जना हाम्रा फुपाजु पैसामा मिल्नुपर्छ भन्न आउनुभयो, बालिकाले भनेकी छन् ! *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
अहिलेसम्मकै अनौठो: ज्योतिषीले महिलाको स्त’न समातेर भ’विष्य बताइदिएपछी सबैको होस उड्यो !! (भिडियो हेर्नुहोस)
अहिलेसम्मकै अनौठो: यस्ता ज्यो’तिष जो महिलाको स्त’न समातेर भ’विष्य हेर्ने गर्छ्न !! (भिडियो हेर्नुहोस) हाम्रो देश प्राचिन कालदेखि नै अ’न्धविश्वास र आड’म्बरीले जबडिएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसहरु सामाजिक अन्धविश्वासमा नै अल्झिरहेका छन् । आफ्नो भविष्य कस्तो होला, के होला भनेर कतिपय मानिसहरु भविष्यव्यक्तामाथि पूर्णतया निर्भर बन्ने गरेका छन् । आफ्नो भविष्य बारे चिन्ता हुनु जायजै भएपनि अन्धवि श्वासमै अल्मलिनुलाई भने एक अनौठो विश्वासको रुपमा लिन सकिन्छ । आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन प्राचिन कालदेखि चलिआएका हात हेर्ने, जन्म कुण्डली हेर्ने लगायतका कुरामा मानिसहरु अझै पनि ज्योतिषकोमा धाउने गर्छन् । ज्योतिषहरुको पनि आ–आफ्नै हात हेर्ने तरिका रहेको पाइन्छ । केहि बर्ष अघि चीनका एक ज्योतिषीको भिडियो सार्वज निक भएको थियो । उनको कुण्डली हेर्ने तरिकाले दुनियाँलाई नै चकित पारेको थियो । उनी महिलाहरुको स्तन
लकडाउनका कारण अहिले धेरैले रोजगारी गु’माएका छन् । यो बीचमा अहिले रोजगारीका लागि अवसर पनि खुल्दैछन् । पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । तर जागिर खोजेर समय वर्वाद गर्नुभन्दा आफुले केहि काम सिके जागिरले आफुलाई खोज्दै आउँछ आफुलाई खोज्दै आउँछ । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ । राम्रो तलब सुबिधासहित अहिले पढ्दै गरेका व्यक्तिहरुले यस जागिरका लागि लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिनलाई जस्तो सुकै उमेरका व्याक्तीले पनि दिन सक्नेछन ! आवेदन दिएका सबैजना मध्य एस्ता निम्न सिपहरु जानेका व्याक्तीहरु लाई प्रथामिकता दिइने छ ! यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता पनि हट्छ ! पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति
म एक १७ वर्षीया युवती हुँ । म विगत पाँच वर्षदेखि पटक पटक बेहोस हुने समस्याबाट पीडित छु । मेरो यो समस्याको निदानका लागि घरमा धामी झाँक्री बोलाउनेदेखि विभिन्न अस्पतालमा पु¥याएर उपचार गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । मैले छारे रोगको औषधि पनि सेवन गरिसकेकी छु । तर, मेरो समस्या समाधान भएको छैन ।स्वास्थ्य जाँचकै क्रममा कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले हि’स्टेरिया भएको र यसको उपचारका लागि बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने सल्लाह मेरो अभिभावकलाई दिएका छन् । म अहिले ११ कक्षामा अध्ययनरत छु । बिहे नगर्ने पक्षमा छु । हिस्टेरिया भनेको के हो र। के यो बिहे गरेपछि निको हुने रोग हो र। मैले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला । उपचार हुने युगमा पनि हिस्टेरियाले गर्दा तपाईंले भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक पीडा सुन्दा दुःख लाग्यो । नेपालमा हि’स्टेरिया को बारेमा सर्वसाधारणमा त पर्याप्त भ्रम छ नै, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीमा प